रिपोर्टर: हरि थापा बाट सम्पूर्ण खबर
मलेसिया लकडाउन भएको ८ दिन भयो। सरकारले गर्न चाह्यो भने के असफल हुँदोरहेछ र। मलेसिया लकडाउन भएको आठ दिन भयो मानिसहरू भित्रबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। जेल जीवन जस्तै उकुसमुकुस छ। तर पनि सरकारको निर्णयलाई पालना गरि
कोरोनाको त्रास! मलेसिया ‘लकडाउन’ को पहिलो दिन
चीनको वुहानबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाईरसको संक्रमण हुने संख्या यो आलेख तयार पार्दासम्म दुई लाख २० हजार पुगिसकेको छ। यस्तै विश्वभरमा मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार पुग्न लागेको छ। यस्तै करिब ८६ हजार सक्रमित व्यक्तिहरू
गरिब देशका धनी नेताको तामझाम!
नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई अब विचरा भन्नुपर्ने दिन आयो। यो सबको पछाडि कारण एउटै छ अनावश्यक तामझाम। जनताको मन जित्न ठूलै युद्व जित्नु पर्दैन। ग्रामिण भेगका जनतासँगै बसेर प्रधानमन्त्रीले एक छाक खाना खाएदिए पुग्छ। त्यती बेला प्रधानमन्त्रीको फोटो पोल
गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स छैन जनप्रतिनिधि महंगा गाडी चढ्छन्
समाननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू! नमस्कार! केही महिना यता यहाँको स्वास्थ्यमा आएको समस्याको कारण हामी निकै दुःखी छौं। मनमा चिसो पस्न थालेको छ। देशको नेतृत्व लिएको तपाईँ चाडै निको हुनुहोस्। स्वस्थ
त्यसपछि दोलखा गुमनाम रह्यो...
दोलखामा त्यत्रो हिउँ पर्दा पनि हिउँ खेलेको दृष्य देख्न पाईएन। कालिञ्चोक कुरिका घरहरू पुरिन लागेको दृष्य सामाजिक सञ्जाल तिर देखियो मान्छे देख्न सकिएन। भिजिट नेपालले त्यो तस्विर कसरी फेला पार्‍यो भन्ने उत्सुकता लाग्यो। त्यति राम्रो सुन्दर दोलखामा कि
बोल्न नपाईने भद्धा मजाक!
ट्रलिबस ब्यवस्थापन के भयो? रेलको कुरो कता पुग्यो? ग्यास पाईप कता कता जोडियो? हावाँबाट विजुली कति ठाउँमा बल्यो? यातयात सिण्डिकेट कार्यन्वयन कता पुग्यो? भुमिसूधार मन्त्रालयको विधेयक के भयो? पानी जहाजको टिकट पाईने स्थान कुन हो? सार्वजनिक यात्राको कठिनाई कहिल